Si xariifnimo leh: Sida Loo Wado Inbadan B2B Leads Iyadoo LinkedIn Sales Navigator | Martech Zone
LinkedIn waa shabakadda bulshada ugu sareysa ee xirfadleyda B2B ee adduunka iyo, muran la’aan, kanaalka ugu wanaagsan ee suuqleyda B2B si ay u qaybiyaan uguna dhiirrigeliyaan waxyaabaha. LinkedIn hadda waxay leedahay in kabadan nus bilyan xubnood, in kabadan 60 milyan oo saamayn heer sare ah. Shaki kuma jiro in macmiilkaaga xigaa uu kujiro LinkedIn… waa arrin kaliya sida aad uhesho, ulaxariir iyaga, iyo inaad siiso macluumaad ku filan oo ay u arkaan qiimaha alaabtaada ama adeeggaaga.
Wakiillada Iibka ee leh waxqabadka shabakadda bulshada ee sarreeya waxay gaarayaan 45% fursado iibsi oo dheeraad ah waxayna 51% u badan tahay inay ku dhuftaan kootadooda iibka.
Waa maxay Iibinta Bulshadu?
Ma u fiirsatay sida aanan ugu magacaabin maqaalkan Sida Loo wado Wadooyin Badan LinkedIn? Taasi waa sababta oo ah xaddidaadaha LinkedIn runtii ka dhigayaan wax aan macquul aheyn a xirfadlaha iibka si buuxda looga faa'iideysto barxadda baaritaanka iyo aqoonsiga rajadooda xigta. Waad ku xaddidan tahay inta farriin ee aad diri karto bil kasta, imisa tilmaamood oo aad kaydin karto, ma garan kartid cidda aragtay astaantaada, ma haysatid marin kasta oo la heli karo oo raadinta ah, mana haysatid marin rajooyinka ka baxsan shabakaddaada degdegga ah.
Tilaabada 1: Isqor Saxeex Navigator Iibiyaha LinkedIn
Khadka Tooska ah ee Iibka waxay ka caawisaa xirfadleyda iibka inay bar-tilmaameedsadaan dadka iyo shirkadaha saxda ah iyagoo ka gaabsanaya rajada saxda ah iyo kuwa go'aanka gaaraya. Iyada oo la raacayo Navigator-ka 'LinkedIn Sales Navigator', xirfadleyda iibka waxay ku heli karaan fikradaha iibka ee iibinta waxtarka leh, la socodsii oo si joogto ah ula soco xisaabaadkaaga iyo horseedyadaada, waxayna kaa caawin kartaa in wicitaan qabow loo beddelo wadahadal diiran Astaamaha barxadda waxaa ka mid ah:
Lead Lead iyo Shirkad Raadin - bartilmaameedka hogaaminta ama shirkadaha leh dhinacyo dheeri ah, oo ay ku jiraan waayeelka, shaqada, cabirka shirkada, joqoraafiga, warshadaha, iyo inbadan.
Talooyinka Lead - Sales Navigator wuxuu kugula talin doonaa kuwa isla go'aamada isla shirkada isla waxaadna ka heli kartaa hogaamiyaasha desktop, mobilada, ama emaylka.
CRM Nidaam - Ka faa'iideyso akoonnada otomaatigga ah, keydadka keydka ah iyo raadadka ka yimaada dhuumahaaga illaa CRM-gaaga maalin walba la cusbooneysiiyo.
Iyada oo la adeegsanayo Navigator Iibka waxaad si fudud ula socon kartaa raadadka iyo cilaaqaadka jira, la soco wixii ku soo kordha xiriirada iyo xisaabaadka, waxaadna u isticmaali kartaa barmaamijka si sahal ah.
Soo hel Tijaabinta Bilaashka ah ee Navigator Iibiyaha LinkedIn
Tilaabada 2: Dhis Liiskaaga Saadaalinta iyo Qor Nuqul Qabow
Waxaa jira erey aan ku isticmaalno LinkedIn markaan qof la xirirno oo isla markiiba nalagu garaaco fariin iib ah oo xasaasi ah sales Xaraashka. Ma hubo cidda la timid ereyga, laakiin gabi ahaanba waa bartilmaameed. Waxay u egtahay inaad albaabkaaga hore furto isla markaana iibiyaha isla markiiba uu ka boodo albaabka oo uu bilaabo inuu isku kaa iibiyo. Waxaan dhihi "iskuday" maxaa yeelay iibinta bulshada runtii wax shaqo ah kuma lahan dejinta, waxay ku saabsan tahay xiriir dhisid iyo qiimo siinta.
Kooxda Cleverly waa khubaro qorista nuqul ka bax qabow oo dhab ahaantii hela jawaabo. Waxay kugula talinayaan in laga fogaado seddexdan qalad:
Ha caddeyn: Ka fogow ereyada qalafsan ee warshadaha oo la hadal niche gaar ah, sidaa darteed waxaad isticmaali kartaa rajada gudaha ee lingo dhab ahaantii isticmaal. Hoos u dhigista ayaa si weyn kor ugu qaadeysa heerarka jawaabta.
Isticmaal gaabis: Wax kasta oo ka badan 5-6 jumladood waxay u egtahay in lagu dul wareejiyay LinkedIn, gaar ahaan marka laga daawanayo mobilada. U sheeg macmiilkaaga mustaqbalka sida aad noloshooda ugu wanaajin karto dhowr eray sida ugu macquulsan. Qaar badan oo ka mid ah fariimaha ugu wanaagsan ee Cleverly waa 1-3 weedho.
Keen cadeyn bulsho: Himilada himiladeeda koowaad ayaa ah inaan lagu aaminin. Marka, waa muhiim in labada magacba loo daayo macaamiil caan ah, sheeg natiijooyin gaar ah oo aad heshay, ama tilmaam kiisaska dhabta ah.
Si xariifnimo leh ayuu u qoraa taxanaha farriinta ee cad, sheekaysiga, iyo qiimaha u horseedda rajadaada.
Talaabada 3: Ha Quusan!
Dadaal kasta oo suuq-geyn toos ah wuxuu u baahan yahay taabasho badan si uu ugu jabiyo rajada. Rajooyinkaagu waa mashquul yihiin, waxaa laga yaabaa inaysan miisaaniyad lahayn, ama xitaa laga yaabin inay ku fekeraan inaad hesho badeecadaada ama adeeggaaga. Taasi waa sababta ay lagama maarmaanka u tahay inaad haysato qorshe dabagal joogto ah, oo si habsami leh u socda. Markii lagugu xiro, rajadu waxay noqoneysaa isku xirnaanta darajada 1aad, waxayna ku jirtaa shabakadaada waligeed, sidaa darteed waxaad ku kobcisaa dabagal iyo nuxur.
Si xariifnimo leh ayey ugu dirtaa 2-5 farriimaha la socoshada rajada, si ay ugu soo bandhigi karaan qiime dheeri ah. Tusaale ahaan, taabashada 3 badanaa waa daraasad kiis, oo cadeyneysa natiijooyinkaaga.
Tilaabada 4: Qiyaas Ku Sii Jiilkaaga Hogaaminta Si Xikmad Badan
Haddii tani u muuqato wax cabsi leh, waxaad u baahan kartaa inaad ku sii wadato adeegsiga Si khaas ah. Si xariifnimo leh waxay leedahay koox u gaar ah iyo barxad ay ku xiriiraan rajadaada adiga oo ku matalaya ka dibna ku riix jihooyinkaaga sanduuqaaga wakiilka iibka halkaasoo ay ka shaqeyn karaan inay xiraan. Tani waxay u oggolaaneysaa dadka wax iibiya inay sameeyaan wixii ay ku fiicnaadaan… iibinta. Ka tag iibinta bulshada si Xariifnimo ah!
Dashboard-ka Cleverly wuxuu ku tusayaa shaashad casri ah oo ka mid ah ololahaaga 'LinkedIn', oo ay ku jiraan cabbiraadaha sida Qiimaha Xiriirka, Qiimaha Jawaabta, Wadarta Tirada Martiqaadyada la diray, iyo Wadarta Tirada Jawaabaha.
Barxadda 'Cleverly' waxay la midowdaa LinkedIn si ay kuu siiso hab wanaagsan oo aad ku maareyn karto, ula socon karto, ugana jawaab celin karto rajooyinka - oo ay ku jiraan tusaalooyinka gujintooda iyo diristooda si loo badbaadiyo saacadaha aad ka jawaabeyso.
Dashboard-ka Cleverly wuxuu u shaqeeyaa sida loo dhisay LinkedIn CRM si uu ula socdo rajadaada wareegga iibka. Ku shaandhee fariimaha Ololaha, Talooyinka, Dareenka Jawaabta, Sahlay, ama Akhriska si aad u sii wadatid dhuumahaaga iibka mid abaabulan, oo marna ha seegin jawaab dambe.
Eeg macluumaadka xiriirka ee rajada kasta ee LinkedIn iyo dhammaan wada sheekaysigaaga LinkedIn hal tab. Xusuus-qor ka sameyso himilooyin kasta oo ku dar sumado qaas u ah qaybinta iyo raadinta. Sidoo kale, jadwal u samee jawaabahaaga si aad ugu baxdo waqti dambe iyo taariikh si loo kordhiyo wax soo saarka.
Sifee xidhiidhada cusub ee 'LinkedIn' magaca, ololaha, sumadaha, goobta, taariikhda, emaylka, iyo lambarka taleefanka. Dhoofinta macluumaadka xiriirka oo soo dejiso liistada isku xirka ku saleysan xuduudahaaga si aad ugu darto CRM-gaaga.
In kasta oo uu si xariifnimo leh u abuuro fariimahaaga gaarsiinta LinkedIn, waxaad sameyn kartaa dib u habeyn iyo hagaajin ku saleysan jawaab celinta ololaha. Haddii aad doorbideyso, waad nala soo xiriiri kartaa si aan dib ugu eegno oo aan uga helno jawaab celin wax ka beddelka farriimahaaga.
Ka jawaab su'aalahaaga, baro sida loo isticmaalo astaamaha muraayada, iyo fikradaha ka hel ololeyaasha waxqabadka ugu sarreeya si loogu beddelo rajooyin badan.
Si xariifnimo leh ayey u haysaa barnaamij ku siinaya adiga shaashad cusub oo ku saabsan ololahaaga 'LinkedIn', oo ay ku jiraan cabbiraadaha sida Qiimaha Xiriirka, Qiimaha Jawaabta, Wadarta Tirada Casuumadaha la diray, iyo Wadarta Tirada Jawaabaha. Mar kasta oo aad jawaab wanaagsan ka hesho sanduuqaaga LinkedIn, si xariifnimo leh ayuu isla markiiba kuugu ogeysiiyaa emayl.
La Tashi Bilaash Ah Si Xariifnimo Leh
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Khadka Tooska ah ee Iibka iyo Si khaas ah.
Tags: b2bbaadi goobka b2biibinta bulshada b2bxariif ahsahaminta qabowhel raadadsoo dirfariimahaLinkedInNaqshadeeyaha iibinta LinkinSaadaaliniibinta bulshada
AddEvent: Ku dar Adeegga Kalandarka ee Shabakadaha iyo Wargeysyada